Famonoana an’ i Romain sy Magalie tao Ste Marie : omena valisoa izay olona manome vaovao marim-pototra (NewsMada) | AEMW
Famonoana an’ i Romain sy Magalie tao Ste Marie : omena valisoa izay olona manome vaovao marim-pototra (NewsMada)
May volon-tratra mihitsy ny manam-pahefana eto amin’ny tanàna amin’ny fanomezana baiko hanafainganana ny fanadihadiana momba ny famonoana ireo Frantsay roa tany Sainte Marie. Izao, miala any ny valisoa lehibe.
Mila hafainganina ny raharaha ! Tamin’ny alalan’ny valandresaka tamin’ny mpanao gazety niarahan’ny prefet-n’ i Ste Marie, lehiben’ny faritra Analanjirofo, Ramarson Jacques, ary ny tonia mpampanoa lalana anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina, Rajaonah Lauret Thierry no nilazan’ ireto olom-panjakana ireto fa mila hafainganina ny raharaha ka omena valisoa tsy ampoiziny izay manome loharanom-baovao ka hafahana mahita ny tena marina. « Tsy anatin’ny kolontsain-tsika malagasy ny mamono olona ary mila hafainganina ny fanadihadiana sy fikarohana mba ivoahan’ny marina », hoy ny lehiben’ny faritra.
Hatreto aloha, raha ny loharanom-baovao hatrany, fantatra teo amin’ny fifandraisana tamin’ny alalan’ny telefaonina sy fanaovana soratra maro sosona (SMS) ny laharan-taribin’ ilay teratany
frantsay hafa sakaizan’ i Magalie teo aloha. Ity farany izay heverina ho anisan’ny atidoha namono nahafaty an’ i Romain sy Magalie noho ny fisarahana teo amin’ny roa tonta. Mbola petrakevitra ihany anefa izany fa mbola anatin’ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana.
Saika itodihan’ny mpanara-baovao maneran-tany ity raharaha famonoana an’ i Romain sy Magalie, teratany frantsay roa mpanao asa soa nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana tao amin’ny Nosy Ste Marie ny alin’ny asabotsy hifoha ny alahady 21 Aogositra lasa
teo . Vokany, nanao be midina any an-toerana avokoa amin’ izao fotoana izao ireo ankolafin-kery rehetra momban’ny fitandroana ny filaminana, ankoatry ny polisy sy zandary ary tafika.
Ny firenena frantsay rahateo efa nanery an-kolaka ny fitondrana malagasy mba hanafaingana ny fanadihadiana ary hahita haingana ny tompon’antoka amin’izao vonoan’olona izao. Asa, hisy vokany ity fanambazana valisoa sy fanerena ataon’ny Frantsay ity.
Antanandava Toamasina : hita tao anaty kirihitr’ala ny fatin’ilay mpitondra bajaj (NewsMada) →